Nizhnevartovsk मा मत्स्य पालन सबैभन्दा लोकप्रिय अवकाश गतिविधिहरु को छ। शहर को साइबेरियन नदी ओब को किनारमा मा खडा छ, लामो माछा यसको प्रशस्त लागि प्रसिद्ध छ। प्रजाति लाल बुक मा विलुप्त संग धम्की र सूचीबद्ध छ किनभने पनि सामान्य starlet, तर यसको क्याच, निषेधित छ। माछा को अन्य प्रकार दण्ड को डर बिना समातिए गर्न सकिन्छ।
को Waterfront मा मत्स्य पालन
Nizhnevartovsk मा मत्स्य पालन - गर्न धेरै रोचक, निपटने, lures, माछा मार्ने तरिका र माछा मार्ने उपकरणहरू को एक किसिम संग परीक्षण गर्न एक महान अवसर।
साईट माझिहरु प्रयोग गर्न रुचि एक जमीन माछा मार्ने निपटने। Nizhnevartovsk विचरण एक "गधा" कास्टिंग, माझिहरु को सधैं भरिएको छ। साइबेरियन - अक्सर rudd, अर्को जसको नाम हुन्छ पकड मछली। माछा यस बरु ठूलो र, पारंपरिक मछली विपरीत,3किलो सम्म वजन गर्न सक्नुहुन्छ। सबै भन्दा राम्रो चारा dace लागि - earthworms, मकै वा आटा छ। माछा मार्ने पनि घुमिरहेको र पारंपरिक ग्याँसचुलोबिना एक फ्लोट संग मा लोकप्रिय छ। क्लासिक माछा फिडर र जिग।
तपाईं भाग्यशाली हुनुहुन्छ भने, जब सिजन मा किनारमा देखि माछा पकडने व्हाइटफिश संग सेतो सामन समातिए गर्न सकिन्छ, र वर्ष बाँकी मा - IDE वा Mokhtari। पूर्वानुमान खानको सधैं सेट गरिएको छ। Dace र अड्डा फेब्रुअरी समातिए गर्न सकिन्छ।
Nizhnevartovsk मा मत्स्य पालन - पनि जाडो र माछा मार्ने मा रोजगार वर्ष-राउन्ड, बन्द गर्दैन। तपाईं ठाउँ ठीक चयन यदि ओब मा बरफ माछा मार्ने धेरै सफल हुन सक्छ।
एक सानो यस्तो IDE रूपमा लगातार चारा सट्टा ठूलो माछा को swallowing, बरफ माछा मार्ने कष्टप्रद Ruff सक्षम छ बिगार्छ। यसरी ershu जसरी प्रयोग के चारा: खैरो वा grubs। को Ruff माझिहरु सफलतापूर्वक एउटा सानो नरम प्लास्टिक चारा जिग प्रयोग लड्न।
एक predator फसाउन, यो zherlitsy, balancers र स्पिनर्स लागू गर्न सिफारिस गरिएको छ। तपाईं भाग्यशाली हो भने, सामान्य Pike, अड्डा र पाइक-अड्डा बाहेक ट्राउट वा burbot समातिए गर्न सकिन्छ। OBI मा predator मध्यम आकार को सामान्यतया। Nizhnevartovsk मा जाडो माछा मार्ने पनि चिसो मा प्वाल मा बस्न मन गर्ने सबै अपील गर्नेछ।
विशेष गरी Nizhnevartovsk मा पोखरी र साना नदीहरू मा माछा पकडने
को Nizhnevartovsk क्षेत्र आसन्न खेल माछा मार्ने प्रेमीहरूलाई लागि ठूलो चासो पनि छन् जो सानो पोखरी, खोक्रो rivulets, संग abounds।
एक सामान्य नियम रूपमा, औसत आकार को ताल मा अड्डा समातिए। यो एक ठूलो माछा पुल शायद सम्भव छ, तर यो क्याच को राशि अप गर्न सक्छन्। राम्ररी रोजेको स्थानमा एक राम्रो उपकरण र साथ, तपाईं 15-20 किलो को कुल वजन एक सय वा बढी माछा गर्न भेट्टाउने गर्न सक्नुहुन्छ। यो बस्ती को पानी जित्न बन्द सेट अघि यो पूर्वानुमान खानको अध्ययन गर्न राम्रो छ।
गर्मी को आगमन संग सीतनिद्रा आक्षेप देखि wakes र खाना को खोज मा जान्छ। जाडो frosts को प्रस्थान संग यो जिग मा आक्षेप फसाउन समय छ भनेर। Nizhnevartovsk मिरर पोखरी र सुन प्रजाति inhabits। यसरी माछा नै ठूलो छ, केही नमूनों को वजन5किलो भन्दा बढी हुन सक्छ। को ओब मा एक यात्रा निश्चित हुनुहोस्। Nizhnevartovsk यसको ठाँउहरु दावा।
Gres - माछा मार्ने लागि सबै भन्दा राम्रो करियर
एक जाडो माछा मार्ने लागि सबैभन्दा उपयुक्त ठाउँ को - Gres Izluchinsk नजिकै ढुङ्गा खानी। त्यहाँ खेल माछा मार्ने घटनाहरुमा कहिलेकाहीं छन्।
माछा को प्रशस्त भएको TPP जीवन र माछा को प्रजनन को लागि एक सिद्ध वातावरणको सिर्जना भन्दा ढुङ्गा खानी बर्बाद गरम पानी मा निरंतर मर्ज किनभने। माछा को मूल्यवान प्रजाति - अक्सर समातिए Pike, ब्रीम, आक्षेप र पाइक एक क्यारियर मा। प्राथमिकतालाई पक्रने बाटो एक फ्लोट संग घुमिरहेको वा पारंपरिक ग्याँसचुलोबिना गर्न दिनुपर्छ। विस्तृत पर्याप्त ढुङ्गा खानी र, यदि चाहेको, inflatable डुङ्गा माछा गर्न सक्नुहुन्छ।
केही मानिसहरू थाहा छ, तर Nizhnevartovsk Shchuchye भनिने ताल दावा। तल आकार, बाक्लो गाद र overgrown खोक्रो backwaters उपस्थिति पाइक लागि इष्टतम वासस्थानमा प्रदान गर्नुहोस्। यो predator मा समातिए छ सबै ताल वर्ष।
, Ponds बरफ को एक पत्र ढाकिएको माइनस - Nizhnevartovsk मा जाडो मौसम मा मौसम। प्रत्येक वर्ष को climatic अवस्था आधारमा, बरफ पत्र को मोटाइ निकै भिन्नता छ, त्यसैले घटनाको सुरक्षा मात्र विश्वस्त हुन सक्नुहुन्छ बरफ माछा मार्ने लागि जान सक्नुहुन्छ। तर यो बाक्लो पत्र अक्सिजन पास गर्दैन र त्यहाँ माहौल संग एक drilled प्वाल वा अन्य संचार छ जहाँ माछा क्षेत्रमा जम्मा हुनेछ। व्यर्थ माछा मार्ने लागि राम्रो स्थान को खोज मा टाढा देशी लक्षविना हिड्नु। तट मा धेरै बास वा dace हुनेछ। Nizhnevartovsk लेक माछा को विभिन्न प्रजातिहरु मा धनी छ।
को जाडो मा क्याच
किनारमा र खोक्रो रूपमा नजिक - सेतो माछा साइट proforage नजिकै जाडो खर्च हुनेछ। यहाँ तपाईंलाई फेला पार्न सक्छन् र सिकारी माछा, अड्डा बाहेक। यो ब्रो को गहिराई मा हेर्न राम्रो छ।
अनुभवी माझिहरु लामो सबै भन्दा राम्रो जाडो ढिलो वर्तमान संग नदी को खण्ड र नदी backwaters को गहिराई गर्न entrances मा काट छ याद छ।
जाडो माछा मार्ने क्याच खुसी हुन सक्छ:
क्याच burbot, tench, आक्षेप, crucian आक्षेप र chub को न्यानो मौसम सम्म स्थगित गर्न राम्रो छ। तपाईं आक्षेप wakes हुन्छ र खाना को खोज मा rises जहाँ कारण गरम पानी को छुट्टी गर्न TPP क्यारियर, मा माछा प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ हुनत।
वसन्त माछा मार्ने
जाडो को प्रस्थान र गर्मी को आगमन संग शिकार प्रजाति को माछा मार्ने प्रतिनिधिको लागि उत्तम समय आउँछ। Nizhnevartovsk सबैभन्दा प्रसिद्ध नदी - ओब।
अप्रिल - धेरै साइबेरियन माझिहरु को मनपर्ने मौसम, किनभने लामखुट्टे अझै आएको थिएन, र शैवाल पानी reservoirs भरिएको छैन। लेट साँझ गर्न प्रारम्भिक बिहान माछा खानको। राम्रो दुवै कृत्रिम lures र प्रत्यक्ष चारा मा, वसन्त पाइक को दोस्रो महिना मा समातिए।
अप्रिल को पहिलो आधा मा, थर्मामीटर उच्च वृद्धि गर्दैन, तर रात frosts सम्भव छ मा, त्यसैले पाइक seabed रुचि, तर खोक्रो पानी गर्न आवश्यक आसन्न छैन: त्यहाँ hunts पाइक। यो predator को shallows लामो छैन ढिलाइ भएको छ, र तुरुन्तै सानो माछा को लागि एक सफल शिकार पछि पूल फिर्ता जान tends। को pits को बाहिर निस्कन मा - यो पाइक लागि सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट स्थान भनेर बाहिर जान्छ।
भोक predator, ठहराव बैठक, zaglotnet यो निश्चित गर्नुहोस्। राम्रो चारा मछली redeyes वा अन्य साना माछा प्राप्त। उपयुक्त चारा फसाउन लागि माछा स्पट मा सही हुन सक्छ। विशेष गरी यदि यो एक औसत गहिराई मा स्थित छ 5-10 सेमी अक्सर हुक बन्द चारा बाँच्न खोज्छ कि हुन्छ, - को ठहराव महत्वपूर्ण भूमिका को आकार प्ले गर्दैन, तर यो एक मध्यम आकारको माछा प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छ।। माछा पर्याप्त बल छ भने भाग्ने, ठाउँ लिन सक्छ। यो रोक्न क्रममा, यो खातामा निर्देशन र लिने, एक फ्लोट प्रयोग र सेल राम्रो छ हावा को बल, इच्छित स्थान मा ठहराव राख्न प्रयास गर्नुहोस्।
को फ्लोट निश्चित छ भने, त्यसपछि म एउटा सानो चारा माछा पाइक समाते, र अब त्यो यो Swallows। राम्रो बुन्ने संग हतार र 15-20 सेकेन्ड प्रतिक्षा छैन। तर यदि ठूलो नमूनों, रूपमा चाँडै सकेसम्म आवश्यकता बुन्ने, अन्यथा pecked, चाँडै चारा swallowed, यो, पूल मा दूर फ्लोट लाइन तोडने।
राम्रो तरिकाले स्थापित र विभिन्न कृत्रिम lures। यो ताल राम्रो Twisters र नरम प्लास्टिक चारा वा जाने छन् स्पिनर्स। नदी creeks र खण्ड - चम्मच।
अप्रिल, को पाइक सुन छोडेपछि कोठामा को दोस्रो आधा, साना मात्र schuryat समातिए।
Nizhnevartovsk प्रेमीहरूको र व्यवसायीक मा मत्स्य पालन। पोखरी र नदी को किनारा मा, तपाईं सारा परिवार सजिलो आराम गर्न सक्नुहुन्छ। प्राकृतिक स्थलहरू र राम्रो क्याच - यो सबै एक फलदायी गुणस्तर छुट्टी छ। तपाईं कि माछा मार्ने छड सबै प्रकारका लिन निश्चित हुनुहोस्।
साइबेरिया मा मत्स्य पालन: सुविधा र लाभ
व्यवस्थापन रणनीति को प्रकार
को जिन्स-गर्लफ्रेंड्स के हो? जिन्स-गर्लफ्रेंड्स के लगाउन?
मस्तिष्क परिसंचरण सुधार कि औषध
उद्यमी को लाभकारी को गणना: मुख्य सूचकहरू।